रोनाल्डो पछि मेस्सी पनि च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलमा, लियोन ५–१ ले पराजित, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
रोनाल्डो पछि मेस्सी पनि च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलमा, लियोन ५–१ ले पराजित
काठमाडौं। क्रिस्टियानो रोनाल्डोको टिम जुभेन्टस च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनल पुगेको भोलिपल्टै लियोनेल मेस्सीको टिम बार्सिलोना पनि लिगको क्वाटरफाइनल पुगेको छ । गएराती नोउ क्याम्पमा भएको खेलमा बार्सिलोनाले लियोनलाई ५–१ ले पराजित गरेको छ । नोउ क्याम्प बार्सिलोनाको होमग्राउण्ड हो जहाँ बार्सिलोनाले पछिल्ला ३० खेलमा एउटा पनि हारेको छैन । उसले २७ खेल जितेको छ र ३ खेल बराबरी भएका छन् ।
क्वाटरफाइनलमा बार्सिलोनासहित, जुभेन्टस, अजाक्स, लिभरपुल, म्यान्चेस्टर सिटी, म्यान्चेस्टर युनाइटेड, पोर्टो र टोटनह्यामले स्थान पक्का गरेका छन् । बार्सिलोनाले यो प्रतियोगितामा अहिलेसम्म एउटा पनि खेल हारेको छैन । उसले ८ खेल खेलेकोमा ५ खेल जितेको छ र ३ खेल बराबरी भएका छन् । गएरातीको खेलमा कप्तान लियोनेल मेस्सीले २ गोल गरे । फिलिप कोन्टिन्हो, गेरार्ड पिक र उस्माने डेम्बेलेले १–१ गोल गरे ।